Umnyango wokuqoqwa kwentela nezomnotho - Bayede News
Mhla zingama-31 kuNdasa bekuphela unyaka wezimali wezi-2020/21 ehhovisi elibhekelele ukuqoqwa kwezimali zentela eNingizimu Afrika, i-South African Revenue Services (SARS). Izinkomba zonke bezilokhu zikhombe phansi maqondana nemali obekulindeleke ukuthi iqoqwe yileli hhovisi elingaphansi koMnyango Wezezimali eNingizimu Afrika.
Ukhuvethe olulokhu lukhungethe leli namazwe onke omhlaba kanjalo nokugqogqa kokukhula ngendlela eyiyo komnotho wakuleli, kube yiyona mbangela eyenze ukuthi lingaqini idolo mayelana nemali evame ukuqoqwa yileli hhovisi lakuleli minyaka yonke.
Nxa singaphonsa iso onyakeni ofile wezimali, mhla lulunye kuMbasa wezi-2020, uSARS wamemezela ukuthi uqoqe imali elinganiselwa kusigidintathu esi-R1,355. Lokhu kwenzeka esigabeni semali eyisigidintathu esi-R1,647, okwathi ngenxa yezigidigidi ezingama-R292 ezabuyiselwa kubakhokhintela, yehla le mali eyaqoqwa. Yize kwakusandakungena ukhuvethe, kwabe kungcono kakhulu lokhu njengoba kwabe kwenyuke cishe ngamaphesenti amahlanu nokuthathu eshumini (5.3%) kunonyaka wangaphambilini, okuyimali elinganiselwa ezigidigini ezingama-R68.2.
Nxa uNgqongqoshe Wezezimali uMnu uTito Mboweni eqagula mhla zizi-4 kuNhlolanja nonyaka, udwebe isithombe esingase singabi sihle ngokuqoqwa kwezimali eNingizimu Afrika ngokuphela konyaka wezimali esisuka kuwo. Lesi sithombe ubesidwetshiswa isimo esazekayo sokhuvethe oludale ukwehla kwezinga lokusebenza kwezimboni kuleli. Kuzokhumbuleka ukuthi izimboni eziningi eNingizimu Afrika ziye zama nse ukusebenza ngenxa yezigaba ikakhulukazi sesihlanu lapho kuye akwangavunyelwa ukuthi izimboni zisebenze. Lokhu kukhinyabeze izimboni ezilethela leli intela eningi, okuyiyona le ntela ethi isize izakhamuzi zakuleli, ikakhulu ekwakhiweni kwezinto ezifana nengqalasizinda, imali yezibonelelo zabakhubazekile nezaguga, ukuqhuba imisebenzi kaHulumeni, ukulethela leli ezemfundo nokukhokhela izikweletu emazweni ezisuke ziyimali ebolekiwe ukukwazi ukuqhuba izidingo zaleli ezingeke zikwazi ukukhokhelwa yile mali eliyakhayo, kwazise isuke ingalingene.
UMboweni wasishaya phansi kakhulu isibalo sokuqoqwa kwentela yakuleli ngenxa yalesi simo lapho aqagula ukuthi leli cishe lingase likwazi ukuqoqa kuphela imali eyisigidintathu esi-R1.21, okungaphansi ngezigidigidi ezingama-R213 ezazilindelekile.
Kulo nyaka nokho leli likwazile ukuqoqa imali elinganiselwa kusigindintathu o-R1.25, okube ngaphezudlwana kweyayiqagulwe uNgqongqoshe ekuqaleni kwalo nyaka. Lokhu kube cishe ngaphansi ngama-7.8% kobekulindelekile, okanti kungaphezulu ngezigidigidi ezingama-R38 kobekulindelekile.
Kuzokhumbuleka ukuthi ezimbonini ezizimele bezimbalwa kakhulu ebezivuliwe, lapha singabala cishe ezolimo, ezokuhwebelana kwezokudliwayo, nezokuxhumana. Izimboni eziningi ezifana nezokuthutha, ezezimali, ezokuvakasha okuyizona ezifaka imali eningi kakhulu kuleli, ezezimayini nezinye bezivalwe thaqa. Kepha kuthe izwe selehlele esigabeni sesithathu zaqala zavulwa iningi lalezi zimboni.
Lapho izwe lizuze khona kakhulu ngokuhlomula enteleni eningi, kube sembonini yezezimayini. Le mboni esekelwe kakhulu ngamazwe angaphandle, ingenye elethela elakuleli intela eningi kakhulu okuthe kulo nyaka, yaletha imali eyizigidigidi ezingama-R41.6 lokhu okweve ngezigidigidi ezili-R16.3 okungama-64.3% nxa kuqhathaniswa nonyaka odlule. Ingxenye yezimbiwa eyengeze imali eningi, kube ngeye plathinamu, igolide, insimbi nezinye ezihambisana nazo.
Izimbiwa yizona ezilethela kakhulu elakuleli imali yentela eningi, futhi ibanangaphezulu kwemali eyenziwa izimayini uqobo. Ezinye zezinkomba zizophuma kuleli sonto, lapho sizobona khona izinkomba ezifana neManufacturing Purchase Index (PMI), okuyinkomba ehlahlela ukuthi sihambe kanjani isimo kwezemikhiqizo eyahlukene kuleli.
Kulindeleke ukuthi umnotho uqhubeke nokuba sengcindezini eznyangeni ezintathu zesibili onyakeni, besekuthi ngezinyanga eziyisithupha ezilandelayo ukhule ngamandla umnotho wakuleli. Nokho konke lokhu kwencike esimweni sokhuvethe olusalokhu luphungwa ngezithebe kuleli. Yize kunjalo, angeke nokho sisabona umnotho wezwe uma nse ngenxa yokhuvethe, kwazise imishanguzo ethiba leli gciwane ibonakala seyiqala inikezwa abantu bakuleli.
Akesihlole umahluko phakathi kokukhula nokunwebeka komnotho wakuleli okubandakanya izimali eziqoqwa ilesi sizinda sakwaSARS.
Kuyathokozisa nokho ukuthi leli lizwe selikwazi ukuqoqa izimali eziyizindodla ngalolu hlobo. Kukodwa lokhu, kusho ukuthi selizokwazi leli ukungaboleki eziningi izimali ngokungenasidingo kumazwe angaphandle ikakhulukazi. Akungatshazwa ukuthi leli zwe likwazile ukunweba umnotho walo selokhu langena enkululekweni ngowe-1994, kwazise nabantu asebeqashiwe baningi kakhulu kunangaphambilini leli lathola inkululeko. Kepha ingwadla elibhekene nayo eyokuthi uHulumeni kuyimanje unakekela abantu abayizigidi ezingamashumi amabili ngemali yezibonelelo, lokhu okubandakanya yona le mali eqoqiwe nemali ephinde ibolekwe ngaphandle. Lokhu sekuphinde kwengezelelwa isibhicongo sokukhuvethe oselwenze cishe abantu abayizigidi ezintathu balahlekelwa yimisebenzi. Kamuva nje, sizwile cishe abantu abangama-600 bomsakazeli womphakathi (SABC) ukuthi nabo badiliziwe. Ukukhula komnotho wakuleli, kuhambisana nesimo leli elaziwa ngaso emhlabeni jikelele njengezwe elihamba phambili ngokungalingani kwabantu balo. Ukungalingani kwalo kusezigabeni eziningi, okuyizindawo zokuhlala, amazinga empilo, ukudla abakudlayo, isemaholweni lapho uye uthole kukhona umuntu enkampanini eyodwa ohola izinkulungwane ezimbili omunye kuyona leyo nkampani ehola izigidi ezimbili ngenyanga.
Umnotho nenkululeko akubonakale kusezandleni zaboHlanga
Ukukhula komnotho ngokomqukuthu owenziwa yizwe laseNingizimu Afrika (GDP) akufanele ubhekwe kalulana nje ngaphandle kokucwaningisisa ukuthi obani laba abakhulelwa umnotho. Kuyavela ukuthi ukukhula lokhu kuhambisana ikakhulu nezikhondlakhondla zezinkampani okuvele kudala zikhona emnothweni. Futhi, lezi, eziholwa ngabelungu. Uthi nxa ubukake aboHlanga ukuthi bona bami kuphi kulokhu kukhula, kudamane kucace ukuthi lincane kakhulu iqhaza labo esibayeni somnotho wangempela, okuwumnotho omkhulu. Okubalulekile manje, ukuthi leli likhulise ngokunwenisa umnotho ukuze ukwazi ukungenisa aboHlanga ngezinxa zawo zonke. Yilokhu uHulumeni ikakhulu emazingeni asemakhaya ebambisene nohulumeni bezifundazwe okumele makakwenze.
I-IMF ibukeza kabusha ukukhula kwaleli emnothweni
Emuva kokubukeza isimo sokhuvethe emhlabeni wonke jikelele, i-IMF okuyinhlangano eyisikhondlakhondla ezinze e-USA, isilethe isethulo esisha ngomnotho womhlaba. Lokhu ikwenze ngokuqagula ukuthi ukukhula kweminotho yamazwe omhlaba kuzosuka kuma-5.5% kuye kuma-6% onyakeni wezi-2021.
Kanjalo nezwelaseNingizimu Afrika nalo libonakala lizokwazi ukusimama kulokho okwakuqaguliwe, kusuka kuma-2.8% kuya kuma-3.1%. Kanti ibhangengodla lakuleli, i-South Africa Reserve Bank nalo liqagule ukukhula komnotho wakuleli ngama-3.8% kanti uMnyango Wezezimali wona ubonakalisa ukwehla okungacishe kulinganiselwe kuma-3.3%.
Phakathi kwazo zonke lezi zinkomba, i-IMF ibuye yabika ngokuthi ukungalingani kwezamaholo kusazodla umunyu ngenxa yokhuvethe olusalokhu lukhona emhlabeni jikelele.
nguGugulethu Xaba Apr 9, 2021